एनिमेटिङ स्लाईड सङ्क्रमणहरू
तपाईँले स्लाईड प्रदर्शन गरेको बेला तपाईँ स्पेशल प्रभाव लागू गर्न सक्नुहुन्छ ।
स्लाईडमा सङ्क्रमण प्रभाव लागू गर्न
साधारण दृश्यमा, स्लाईड चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ कारोवार प्रभाव थप गर्न चाहनुहुन्छ
कार्यहरू फलकमा, क्लिक गर्नुहोस् स्लाईड सङ्क्रमण.
सूचीबाट स्लाईड समक्रमण चयन गर्नुहोस् ।
कागजात सञ्झ्यालमा तपाईँ सङ्क्रमण प्रभाव पूर्वालोकन गर्न सक्नुहुन्छ ।
एक भन्दा बढी स्लाईडमा उस्तै कारोवार प्रभाव लागू गर्न
स्लाईड क्रमबद्वकर्ता दृश्यमा, स्लाईडहरू चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ कारोवार प्रभावहरू थप गर्न चाहनुहुन्छ.
कार्यहरू फलकमा, स्लाईड सङ्क्रमण क्लिक गर्नुहोस्.
सङ्क्रमण प्रभाव हटाउनका लागि
स्लाईड क्रमबद्वकर्ता दृश्यमा, स्लाईडहरू चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ कारोवार प्रभावहरूबाट हटाउन चाहनुहुन्छ.
छनौट गर्नुहोस् कारोवार छैन सूचीबाकसको कार्यहरू फलकमा.
Title is: एनिमेटिङ स्लाईड सङ्क्रमणहरू